Etu ị ga - esi ahọrọ igwe kwụ otu ebe maka ire ere | ebike Shuangye
Mbido blog News Etu ịhọrọ igwe kwụ otu ebe maka ịzụrụ nduzi
Datebọchị ： 2020-08-26 Categories ：News Nlele ： 2,171
Igwe eletriki igwe na-aghọ njem dị ukwuu maka ọtụtụ mmadụ n’oge COVID-19, ngwa ngwa karịa igwe kwụ otu ebe, na nchekwa karịa njem ọha na eze. Achọghị ịchọta ebe ị na-adọba ụgbọala pụrụ iche, dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na ịzụrụ igwe eletriki mpịachi, ọ nwere ike ịbelata kpamkpam wee tinye n'ọfịs gị. N'ihi na moto bibiri nwere ọtụtụ ụdị, ma eleghị anya, otu onye n'etiti unu na-esikarị ike ịme mkpebi tupu ịzụta igwe kwụ otu ebe. Ọzọ, ahọrọla m ihe ole na ole ị nwere ike ịchọpụta maka mkpebi ka ọ dịrị gị mfe ịnweta e-ịnyịnya igwe kachasị mma.
Gịnị mere ị ga-eji jiri igwe kwụ otu ebe?
Ọ bụ ajụjụ dị mkpa na ihe ị ga-eme na igwe eletrik. Ndị mmadụ na-eji e-bike kachasị mma maka ebumnuche dị iche iche. E jiri ya tụnyere igwe kwụ otu ebe, igwe eji agba ịnyịnya nwere igwe eletriki, igwe batrị na sistemụ eletriki. Uru kachasị mkpa nke iji igwe eletriki igwe eletriki bụ na ndị a bụ ndị na-eme ka gburugburu ebe obibi dị mma, ma ghara ịkpata mmetọ ọ bụla na gburugburu ebe obibi. E-igwe kachasị mma bụ ụzọ kwesịrị ekwesị maka njem maka ikpuchi obere ọsọ ọsọ. Yabụ ụfọdụ ndị na - eji igwe eletrik arụcha ọrụ ha n'oge, dịka ọmụmaatụ, ịgba ọsọ ọsọ. Ha na-echekwa oge ha site n'ịgbagharị n'ụzọ dị mfe na igwe eletrik ha gburugburu ebe ndị agbata obi. Ọ bụrụ na ị na-eme atụmatụ ịmegharị ahụ gị ma gbaa ụfọdụ calorie ọkụ, ọnọdụ enyemaka na pedal na ọnọdụ pedal abụọ bụ nhọrọ kacha mma.
Ego ole ka ịnyịnya ígwè nwere? Modeldị igwe eletrik ọ bụla nwere ibu dị iche iche. Ọ ga-adị mma ka enyocha ibu ha site na nkọwapụta ndị nrụpụta nyere. N'ikwu okwu n'ozuzu, ibu ahụ abụghị nnukwu ọdịiche. Dabere n'ụdị igwe kwụ otu ebe, moto, batrị na igwe kwụ otu ebe, ụdị nke ọ bụla kachasị e-anyịnya igwe dị iche iche dị iche iche ga-adị iche, enwere ọtụtụ ụdị dị iche iche site na nke kachasị njọ na igwe elektrik. A na-agbakọkarị, igwe eletriki igwe eletriki ma ọ bụ n'okporo ụzọ e igwe kwụ otu ebe bụ elektrik e-bike, yana nnukwu ike ọkụ eletriki igwe eletrik dị na igwe elektrik kachasị elu, mana moto ga-ewepu mmetụta a dị arọ mgbe ị na-agba ịnyịnya. Ogo dị n'etiti 20 to28kgs dị mma.
Ọsọ ọsọ Max
Isi okwu a enweghị ike ileghara anya. N'ezie, ị kwesịrị ịma banyere nke ahụ. Enwere ụfọdụ mmachi nke igwe eletriki igwe kwụ otu ebe na mba ụfọdụ. Dịka ọmụmaatụ, mba European Union mba oke ọsọ agaghị agafe 25km / h. Ọ bụrụ n ’ị tụlere ọsọ ọsọ dị ka nhọrọ, mgbe ahụ ịkwalite mmefu ego ga-enyere aka. The max ọsọ elu, ndị na-eri nke igwe kwụ otu ebe elu. Ọtụtụ mgbe, nkezi ọsọ dị ka 25-35km / h, nke dị mma ma dịkwa mfe maka njem. Maka mmadụ, isi ihe na-ahọrọ igwe eletriki eletrik na-eme ka njem ha dị mfe na mpaghara ugwu na ọ bụghị ọsọ.
Fọdụ ndị na-eche na e-igwe kwụ otu ebe dị ọnụ ala enweghị nnukwu ọdịiche dị n'etiti igwe eletriki igwe eletrik dị elu na ogo. Ka o sina dị, nke ahụ bụ ajọ mbunobi. O doro anya na àgwà nke ebike nwere njikọ ụfọdụ na ọnụahịa. N'ihe banyere usoro teknụzụ na-ejikwa kọmputa, ihe, ihe ndị ọzọ na ihe ndị ọzọ, ha nwere ụfọdụ ọdịiche dị na mma taya, breeki diski, batrị, ọrụ ikike, ect.
Ọ bụrụ na ị nwere mmasị na igwe kwụ otu ebe ma chọọ ịmatakwu, ị nwere ike ịchọgharị edemede ndị gara aga ma ọ bụ gaa na nke anyị Ụlọ Ọrụ Weebụ, họrọkwa ịhapụ ozi gị n’okpuru.
Tags:motorized anyịnya igwe igwe eletriki igwe eletrik
Mbụ: Uru nke ịzụta igwe kwụ otu ebe
Next: A ga-eme 128th Canton Fair na ntanetị na Ọktọba